सफलताको कथाः १४ वर्षमा ५ हजारको कोख भरियो • nepalhealthnews.com
पुरुषोत्तम घिमिरे, जनस्वास्थ्य सरोकार || प्रकाशित मिति :2018-06-11 09:20:44
डा. सानुमैयाँ श्रेष्ठ (प्रधान) टेष्ट ट्यूब बेबी विशेषज्ञ क्रियटर्स आईभिएफ नेपाल, सातदोवाटो, ललितपुर
ललितपुरको सातदोवाटोस्थित क्रियटर्स आईभिएफ नेपालकी सञ्चालिका वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सानुमैयाँ श्रेष्ठ (प्रधान) टेष्ट ट्यूब बेबी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । अष्ट्रेलियाबाट आफ्नो अध्ययन सकेर सन् २००४ मा नेपाल फर्केपछि डा. सानुमैंयाको निःसन्तान दम्पत्तिलाई सन्तान सुख दिने अध्याय शुरु भएको थियो । १४ वर्षको अवधिमा साधारण उपचार, आईयुआईदेखि आईभिएफसम्म गरी करिब ५००० भन्दा बढी दम्पत्तिलाई सन्तान सुख दिन सफल भएकी डा. सानु मैँयाको सुझाव छ—‘पहिला सन्तान नहुनुको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यसपछि गर्भाधारणका लागि साधारण तरिकाबाट उपचार शुरु गर्नुपर्छ ।’
नेपाल फर्किएपछि डा.श्रेष्ठले प्रशुति गृहको एकेडेमिक रजिष्टार हुँदै ओम हस्पिटलको ओम आईभिएफ सेन्टरसम्म काम गर्नुभएको थियो । पछि ग्वार्कोस्थित ग्लोवल हस्पिटलमा रहेको आईभिएफ नेपालबाट पनि धेरैको कोख भर्न सफल हुनुभयो । प्रस्तुत छ डा. सानुमैँयाको सन्तान सुखसम्बन्धि जानकारी उहाँको आफ्नै शव्दमा ।
नेपालमा सन्तान नहुने समस्या
नेपालमा पति पत्नीको सबै कुरा ठीक भएर पनि सन्तान नहुने समस्या धेरै छ । यस किसिमको समस्या लिएर मेरो क्लिनिकमा आउने दम्पत्तिको संख्या करिब ४० प्रतिशत छ । शुक्रक्रिट शुन्य हुने पुरुषहरुको संख्या करिब २५—३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । महिलाको पाठेघरको दुवै नली बन्द हुने संख्या पनि धेरै छ । यसका लागि आईभिएफको विकल्प छैन । यस किसिमको समस्या योनीको सरसफाइमा ध्यान नदिँदा हुने संक्रमण, पटपटक गर्भपतन गराउँदा हुनसक्ने इन्फेक्सन, पाठेघरको ट्युमर निकाल्दा हुनसक्ने संक्रमण, पेल्भिक संक्रमण, इन्ड्रोमेट्राइटिस, क्षयरोगलगायतका कारण पाठेघरको दुवै नली बन्द हुनसक्छ । यद्यपी मेरो अनुभवमा पाठेघरको दुवै नली बन्द भएर आईभिएफ गराउनुपर्ने महिलाहरुको संख्या धेरै छ ।
पोलिसिस्टिक ओभारियन सिन्ड्रोम (पिसिओएस) का कारण २—३ महिनामा महिनावारी हुने कतिपय महिलाको ओभुलेसन कहिले हुन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन । कसैकसैको महिनावारी भएको २६ औं दिनमा बल्ल अण्डा बनेको हुन्छ । यो समयमा यौन सम्बन्ध राख्न सल्लाह दिँदा गर्भवती भएका धेरै उदाहरण छन् । पतिको शुक्रक्रिट राम्रो भएको अवस्थामा पत्नीको ओभुलेसन ढिला भएर केही हुँदैन । हामीले ट्रयाक गरेर हेरेर यौन सम्बन्धमा बस्न सल्लाह दिने गर्दछौं । यसरी बाँझोपनाको उपचारलाई सिम्लिफाइड तरिकाले लैजानुपर्छ । ठूलो इन्भेष्टिगेसन गर्नपूर्व अवस्था सामान्य भएमा पत्नीको ओभुलेसन भएको समय मिलाएर यौन सम्बन्ध राखेमा गर्भ वस्नसक्छ ।
सन्तान नहुँदाको पीडा
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक देशमा करिब १५ प्रतिशतमा इन्फर्टिलिटीको समस्या देखाएको छ । सन्तान नहुँदा व्यक्तिगत, पारिवारिक वातारण तनावपूर्ण भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा निसन्तान दम्पतिको काउन्सिलिङ आफैं गर्छु र आवश्यक परेमा निःसन्तान दम्पत्तिको घरपरिवारलाई पनि काउन्सिलिङ गर्छु । उहाँहरुलाई एक प्रकारको कन्फिडेन्ट दिन्छु कि निःसन्तानको उपचारका हरेक खुड्किलो चढ्दै जाँदा सन्तान सुख अवश्य प्राप्त हुन्छ । उहाँहरुलाई सम्झाइसकेपछि बच्चा नहुनुको कारणबारे अनुसन्धान शुरु हुन्छ । इन्फर्टिलिटी दम्पत्तिलाई उपचारका साथै उनीहरुको तनाव कम गर्नु पहिलो कर्तव्य हुन्छ ।
कुनै समस्या नभएका कपितय दम्पत्तिको सन्तान भइरहेको हुँदैन । महिलाहरुमा ओभुलेसनको समय र इन्टरकोर्ष (यौन सम्बन्ध) को समय नमिल्दा बच्चा नभएको हो । यस्तो अवस्थाका महिलाहरुको अण्डा बनेको समय हेरेर अण्डा फुट्ने औषधि दिनुपर्छ । यसलाई ट्रिगर इन्जेक्सन भनिन्छ । ओभुलेसन गराउने इन्जेक्सन दिएर दुई दिन सँगै बसेर इन्टरकोर्ष गर्ने सल्लाह दिएका करिब ४० प्रतिशत महिला गर्भवती हुने गरेका छन् । नियमित महिनावारी हुने महिलाहरुको फर्टायल टाइम व्यक्ति अनुसार कसैको १०, कसैको १२ र कसैको १४ दिन, कसैको २० दिनमा हुन्छ ।
पोलिस्टिक ओभारियन डिजिजमा यदि पुरुषको शुक्रक्रिटको अवस्था ठीक छ भने औषधिको माध्यमबाट महिलाको अण्डा विकास गरेर टाइम्ड इन्टरकोर्ष गर्ने सल्लाह दिएका धेरै महिला गर्भवती भएको मेरो अनुभव छ ।
त्यसपछि करिब ६० प्रतिशतलाई आई.यु.आई. को सल्लाह दिइन्छ । उनीहरुमा आई.यु.आई. गर्दा प्रिग्नेन्सी (गर्भाधारण) दर १२ देखि २० प्रतिशत मात्र छ । पुरुषको शुक्रक्रिटको क्वालिटी (गुणस्तर) र संख्या कम भएका व्यक्तिलाई आई.यु.आई. गरिन्छ । प्रति मिलिलिटर (एमएल) वीर्यमा शुक्रक्रिटको संख्या १५ मिलियन भन्दा बढी हुनुपर्छ । चल्ने शुक्रकिटको संख्या ५० प्रतिशत भन्दा कम भएमा पनि गर्भ बस्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा पुरुषको शुक्रक्रिटलाई सफा गरेर गुणस्तरीय बनाएर महिलाको पाठेघरमा राख्नुपर्छ । यो प्रविधिलाई आईयुआई भनिन्छ । आईयुआई ६ साइकलसम्म गरिन्छ । त्यो बेलासम्म प्रिग्नेन्सी हुन नसकेमा आईभिएफ गर्ने सल्लाह दिइन्छ ।
आईभिएफमा गाइनेकोलोजिष्ट, इम्ब्रोइलोजिष्टको भूमिका
प्राकृतिक तरिका र आई.यु.आई.गरेर पनि सन्तान हुननसक्ने अवस्थाका दम्पत्तिमा आई.भि.एफ.गर्नुपर्छ । आईभिएफको पुरा नाम इनभिट्रो फर्टिलाईजेसन हो । ‘भिट्रो’ ल्याटिन शव्द ‘भिट्रस’ बाट आएको हो । भिट्रसको अर्थ ग्लास हो । यसरी पत्नीको अण्डा र पतिको शुक्रक्रिट ल्याबभित्र एउटा ग्लासमा मिलाएर बनेको भ्रूण महिलाको पाठेघरमा राख्ने प्रविधि आईभिएफ हो ।
आई.भि.एफ.गर्दा एन्ड्रोलोजी ल्याबमा पुरुषको शुक्रक्रिट प्रोसेस गरेर तयार पारिन्छ र इम्ब्रोइलोजी ल्याबमा पुरुषको प्रोसेस्ड शुक्रक्रिट र महिलाको अण्डा मिलाएर इम्ब्रियो बनाइन्छ । ४८ घण्टामा फोर सेल स्टेजको इम्ब्रियो भएपछि पाठेघरमा राख्ने काम गरिन्छ । यसरी आई.भि.एफ गरेको १५ दिनमा परीक्षण गर्दा गर्भ रहेनरहेको पत्ता लाग्छ । हाम्रो सेन्टरमा आई.भि.एफ. प्रिग्नेन्सी दर ४५ प्रतिशत छ । क्लिनिकल प्रिग्नेन्सी दर ३९ प्रतिशत छ । आई.भि.एफ.बाट गर्भधारण गरेर बच्चा जन्माउने दर २९ दशमलब ७ प्रतिशत छ ।
हाम्रो क्लिनिकमा विगतमा बाहिरबाट इम्ब्रोइलोजिष्टको सहायतामा ग्रुपमा आईभिएफ गरिन्थ्यो । अहिले हाम्रो आफ्नै इम्ब्रियोलोजीष्ट भएकाले गत साउन २०७४ देखि नियमित आईभिएफ गर्न थालेका छौं । नियमित आईभिएफमा दम्पत्तिको कन्डिसन अनुसारको आईभिएफ प्रोटोकल छान्न पाइन्छ । तसर्थ यो राम्रो हो ।
ढिलो बच्चा नजन्माऊँ
भर्खर विवाह गरेका नवदम्पत्तिहरुले करियरसँगै बच्चा जन्माउँदा राम्रो हुन्छ । करियर बनाउने लोभमा बच्चा जन्माउन ढिलो नगर्दा राम्रो हुन्छ । महिलाहरुको उमेर बढ्दै जाँदा अण्डाको भण्डार कम हुँदै जान्छ । त्यसैले ढिलो बच्चा जन्माउनेहरुले एकपटक सम्बन्धित चिकित्सकसँग सल्लाह गर्न जरुरी हुन्छ ।